Uyilo kuthelekiswa nelungelo lokushicilela | Martech Zone
Ukuyila kuthelekiswa nelungelo lokushicilela
NgoLwesithathu, Julayi 9, 2008 NgoLwesithathu, Julayi 9, 2008 Douglas Karr
Oku, mhlawumbi, enye yeefayile ze- Ezona ngxoxo zibalaseleyo zemithetho yelungelo lokushicilela (IMO) ayisiyonto ingalunganga, kodwa ikwayi-bane kwinkcubeko yethu yoyilo. Intlungu ebangelwe yile mithetho iyandiswa kukuqhushumba kwamathuba esiwanikwa yi-Intanethi. Eyona nto imnandi kukuba umyalezo kunye nembali kuyaxoxwa ngazo apha ULarry Lessig, igqwetha.
Ingcebiso yomnqwazi ku Lorraine ukufumana!
tags: u bubelenounhambauphononongo lokuhambaumbhalo
IKlabhu yeTekhnoloji eseMazantsi eSmoosier
Ibali lokwenyani: Isiseko sedatha? Cofa… Doh!
Jul 12, 2008 ngo-1: 20 AM
Ewe, ndiyawuthanda umyalezo wakhe. Ngokomzekelo, ndafunda Inkcubeko yasimahla kwiminyaka eliqela eyadlulayo, yaye ndandiyiva intlungu yakhe kakhulu. Nangona kunjalo, ngazo zonke iisuti ezithengiweyo nezihlawulelweyo esinazo kwiCongress andinathemba lokuba izinto ziya kutshintsha kwixesha elizayo. ;-(
NgoJulayi 12, 2008 ngo-3:25 PM
Ngokuqinisekileyo sinengxaki kweli lizwe apho amalungelo oshishino edlula amalungelo omntu ngamnye.